Falanqeynta Kulanka Xiisaha Iyo Xamaasada Leh Ee Group B Euro 2012 Ee Portugal v Holland. - jornalizem
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Iyo Xamaasada Leh Ee Group B Euro 2012 Ee Portugal v Holland.
Tababaraha xulka Portugal Paulo Bento ayaan dhaawacyo qabin kulanka caawa uu Natherlands kaga hor imaanaayo gegeda Metalist Stadium ee magaalada Kharkiv.
42 jirkaani ayeyna u badan tahay inuu magacaabo xulkiisii 3-2 kaga adkaaday Denmark arbacadii,iyadoo Helder Postiga oo ku nagaanaayo booskiisa weerarka marka lo fiirsho Hugo Almeida iyo Nelson Oliveira.
Hollad ayaan qabin wax dhaawacyo ah laakiin Bert van Marwijk ayaa tixgelin kara inuu isbedel badan ku sameeyo Xulkiisii labadii kulan ee ugu horeysay ee koobka Qaramada Yurub guuldarada kala kulmay xulalka Denmark iyo Germany iyadoo ay waajib ku tahay inay Netherlands guulystaan ayna guuldarro u rajeeyaan Danmark hadii ay doonayaan inay uso baxaan wareega 8da.
Klaas-Jan Huntelaar ayey u badan tahay inuu weerarka ka bedeli doono Robin van Persie iyadoo sidoo kale ciyaaryahanka Barcelona Ibrahim Afellay ay macquul tahay inuu qeyb ka noqdo labada garab ee weerarka midkood.
Ciyaaryahanka dhowaanta ku biiray kooxda reer Turki ee Fenerbahce Dirk Kuyt ayaa la ogyahay inuu isna tixgelin doono inuu booska ka bedelo Arjen Robben oo aan muujin bandhig soo jiidasho leh labadiisii ciyaar ee u horeysay.
Line Up-ka Macquul Ah
PORTUGAL:� Rui Patricio;� Pereira, Pepe, Alves, Coentrao;� Meireles, Veloso, Moutinho;� Nani, Postiga, Ronaldo
NETHERLANDS:� Stekelenburg;�Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Willems ;� N De Jong, Van Bommel;�Van Persie, Sneijder, Robben; Huntelaar
10kii kulan ee ay Portugal la ciyaarrtay Netherlands waxa ay badisay lix jeer, seddex jeer barbaro ayay galeen, hal jeerna guuldarro ay soo gaartay, iyadoo guuldarada kaliya ay aheyd isreebreebkii Euro 1991
Portugal waxa ay ku xaqiijisan kartaa booskooda wareega 8da inay badiyaan, ama in Denmark ay 3-2 ama natiijo intaas ka badan oo farqigeedu uu hal gool yahay. Barbaro xitaa waa ku filnaan doonaa hadii Denmark ay badin weyso. Portugal sidoo kale waa ay soo bixi kartaa hadii looga badiyo natiijo farqigeedu yahay hal gool islamarkaana Denmark la garaaco.
Goolkii Helder Postiga uu ka dhaliyey Denmark ayaa la micno ah inuu noqonaayo ciyaaryahankii lixaad ee gool ka dhaliya sedax koob oo kala duwan oo Yurub ah ka dib markii ay sidaasi sameeyeen Jurgen Klinsmann, Vladimir Smicer, Nuno Gomes, Thierry Henry iyo Zlatan Ibrahimovic.
Fabio Coentrao, Cristiano Ronaldo, Raul Meireles iyo Postiga ayaa dhaamntood hal jaale u jira inay ganaax u seegaan kulanka kan xiga hadii ay soo baxaan.
Netherlands ayaa guuleystay sedax ka mid ah sagaalkoodii kulan ee caalami ah ee ugu dambeysay. Weligood ma aysan guuldareysan hadda ka hor laba ciyaar oo Group ah intii ay ciyaarayeen Tartanka Yurub.
Wiilasha Bert van Marwijk ayey qasab ku tahay inay ku garaacaan Portugal in ka badan laba gool ayna rajeeyaan in Denmark guul darro kasoo gaarto Germany.
Maarten Stekelenburg wuxuu diirada saarayaa inuu safto kulankiisii 50aad ee Holland.
Mark van Bommel, Jetro Willems iyo Nigel de Jong ayaa ganaax ku maqnaan doona hadii ay qaataan Hurdigooda xiga.